1.This akateedzera emuchina yendege otomatiki kutumira mhando sandblasting muchina, hutachiwana kumhanya inowanikwa frequency kutendeuka kwedhijitari kudzora Sandblasting kumhanya, kugadzirisa mhando kwakatsiga, nyore mashandiro. 2. Isai workpiece pabhandi rekutakura panguva yekushanda, uye sandblasti ...
Chinese Nyowani gore 2021
Tichava nezororo refu kubva munaFebruary 5 kusvika 18. Hatisi kuzoendesa chero zvinhu Panguva ino, asi isu tinogona kuramba tichipindura email nenguva Toshuvira Vatengi vedu Vatsva nevakuru vave nerunyararo.
Water Sandblasting muchina aivigirwa Australia
Stainless simbi zvinhu Mvura sandblasting muchina Yakanaka pombi 2.5KW, uye maitiro ekugadzirisa voltage 415V Windshield wiper nyanzvi sandblasting pfuti Ive yakarongedzwa nePlywooden bhokisi
Yakakwira kumanikidza Jecha nenyunje kabhineti nekumanikidza hari
Kumberi Kudzoka Iyo yakamanikidzwa bhokisi sandblasting muchina wakarairwa neJiaxing yakanyorwa kambani yaendeswa. Iyo yakakwira-yekumanikidza sandblasting muchina unoumbwa nefaera guruva muteresi uye kumanikidza tangi. Inoda kuve yakagadzirirwa neai ...
Nheyo uye Kupatsanura kweVibration Grinder (1)
Processing chinhu: Vibration kukuya michina inoshandiswa mumabhasikoro, aruminiyamu kufa-kukanda zvikamu, zinc kufa-kukanda zvikamu, fenicha Hardware, zvipfeko Hardware, mukwende Hardware, magirazi zvishongedzo, wachi uye wachi accessories, kukiya, zvemagetsi zvishongedzo, ese marudzi ezvishongo, zvishongo, hupfu ...
Musiyano uripakati pechando uye kupfura kuputika
Maitiro ese ari maviri anoshandiswa kuchenesa iyo workpiece yepamusoro uye kubvisa guruva.Sand Blasting inzira inoshatisa inoshandiswa kuchenesa nzvimbo dzengura nemarara. Kazhinji inoshandiswa pamberi pekupenda kana yekumonera maitiro. Inoshandisa midhiya yakapinza, kana jecha, kuchizel kure kure kumusoro kunge kupaza ...
Maitiro Ekubvisa Rust neSand Blaster
Ngura yeSandblasting kubva mumotokari ichaita kuti zvive nyore kudzoreredza uye kupenda. Unogona kushandisa mhando dzakasiyana dze media kune sandblast, zvinoenderana nesimbi yemota uye saizi yepasi. Sandblasting chinhu chinodiwa usati watanga kudzorera Bvisa marara kubva kune yakakura nzvimbo yekushandira iri hombe enoug ...
Basa rejecha nenyunje muchina uye bara nenyunje muchina
Jecha nenyunje michina inoita basa rakakosha mukuita, hongu, kune mamwe akawanda maindasitiri, zvigadzirwa zvakawanda zvakashandiswa mujecha blasting muchina wekubata. Sand-blasting muchina ndiko kushandiswa kwemhepo yakamanikidzwa, jecha, yakakwira-kumhanya kurohwa nepfuti kamwene apo pevhu ngura product ...
Shot Blasting Machine - Zvishandiso
Kune akawanda mashandisirwo epfuti nenyunje michina. Chekutanga uye chekutanga chikumbiro kuchenesa kwevanokanda kubvisa yakasununguka uye yakapisa jecha uye chiyero kubva kune ferrous uye isiri-ferrous castings. Kupfura kupfura maitiro kunoderedza porosity uye kunowedzera kumanikidza nekumira kugona kwealuminium
akasiyana chikamu sandblasting muchina
Zvikamu zvitatu zvakasiyana nezve sandblasting muchina Sandblasting setup inowanzo kuve nezvikamu zvitatu zvakasiyana: iyo hasha pachayo, mweya compressor, uye blaster kamwene. Yekucheka etching uye diki chinhu kuchenesa, nzvimbo yekushandira yekubata chidimbu chegirazi inodiwa zvakare, sekune imwewo mhando yekuunganidza ...
chii chinonzi Shot blaster muchina
Shot blaster muchina ndeimwe yemidziyo yakakosha yesandblasting. Ehezve hakuna imwe chete pfura blaster muchina, nekuti kune dzimwe nzira dzakawanda dzakasiyana dzejecha. Shot blaster muchina unogona kuve nemana, matanhatu, masere kana kunyange mamwe mavhiri, uye inogona kuve neyakagadziriswa nzira ye ...
Nenyunje muchina mutengo
HST blasting muchina mutengo ndiyo yakachipa pane imwechete indasitiri vagadziri. Sandblasting muchina mutengo, ndinoziva zvishoma kubva online mutengo wejecha nenyunje muchina, uye kubva kumutengi pafoni kubvunza nevamwe anotevera blasting muchina jecha nenyunje muchina vagadziri mutengo ...